Dadka ku nool dhulka miyiga ee Gobolka waqooyi bari Kenya badankood wax ma akhriyaan mana qoraan.
Magaalada Muqdisho waxa markii ugu horeysay lagu soo bandhigay adeega Triple Play oo ah adeeg aad hal waayar oo kaliya u adeegsan karto internet xawaare sare leh, wax walba.
Taliye Khaliifa Xaftar oo Liibiya dib ugu laabtay
Ninka isku boqray inuu yahay Taliyaha ciidanka Liibiya Khaliifa Xaftar, ayaa dalkaa dib ugu noqday ka dib labada todobaad oo uu arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka dibadiisa.
Boko Xaaraam oo weerar culus ku qaadday magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria
Wararka ka imanaya magaalada Maiduguri ee waqooyi bari Nigeria ayaa sheegaya in dagaal culus ay magaalada ku soo qaadeen ururka Boko Xaaraam.
Soo shaac bixidda boqorka reer Masar ee u dheelo kooxda Liverpool ayaaa si wayn looga dareemay dalkayga iyo dhammaan dunida.
Maxaad ka ogtahay dadka ka jawaaba wicitaanada gargaarka degdega ah ee nambarka 999?
Jamie todobaadkii waxa uu ka jawaabaa illaa 350 wicitaan, qaarkoodna ma wada ahan kuwa muhiim ah, waxaa jira dad iska soo wactama iyaga oo aysan haysanin xaalad daran oo gargaar u baahan.
Dowladda Tanzania oo mamnuucday dibadbaxyada ka dhanka ah Magufuli
Dalka Tanzania waxaa maanta aad loo adkeeyay ammaanka kaddib markii mas'uuliyiinta dalkaasi ay gebi ahaanba mamnuuceen dibadbaxyo ay ku baaqeen kooxaha mucaaradka.
Muxuu Kim Jong-un u joojiyay tijaabooyinka gantaalada?
Sababta lagu sheegay in loo joojiyay ayaa ah in Kuuriyada Waqooyi ay gaartay yoolkii ay ka lahayd tijaabada, islamarkaasba ay ebyantay sancada gantaalada.
Booliiska dalka Nigeria ayaa weeraray goobo lagu hayay carruuro badan, kuwaas oo si sharci daro ah looga macaashayay carruurta sida uu BBC-da u sheegay Agboola Dabiri oo ka tirsan saraakiisha magaalada Lagos.
Barakac ka dhashay fatahaada webiga mara Gaarisa
Qaar kamid shacabka ku dhaqan degmada Gaarisa ee Waqoo Beri Kenya ayaa ka qaxay guryahooda kaddib markii uu kusoo fatahay webiga maro deegaankaasi ee Tana.
Bajaajta magaalada ku bataday dadka ka biyo diiday waxaa ka mid ah tagsiileyaasha magaalada oo u arka in ay shaqadii ka maroorsatay.
Baarlamankaa haatan shaqeeya oo ka kooban 82 xubnood ayaa gabadh keli ahi ku jirtaa.
Saynisyahanno Shiinays ah ayaa sheegay in ay qayb ahaan duntay xaruntii ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabin jirtay hubka nukliyeerka ah, taas ka dhigi karta mid aan la adeegsan karin.
Askari Israa'iili ah oo loo xiray in uu dilay kuray Falastiini ah
Maxkamad ku taalla Israa'iil ayaa xabsi ku xukuntay booliis hore oo xadka ilaalin jiray, kaas oo toogasho ku dilay wiil kuray ah oo mudaaharaad ka qaybqaadanayay 2014kii.
Masaajidkii qaddiimiga ahaa ee Mowsil oo dib loo dhisayo